Ahoana ny fomba fampandehanana ny a2f amin'ny Fortnite Switch? | la-manette.com
Zava-dehibe ny fanamarinana roa lafin-javatra an'i Fortnite. Ny rafitra fanamarinana roa an'ny Fortnite dia manampy sosona fanampiny eo aminao sy ireo mpijirika. Toy ny hidim-baravarana hitehirizanao ny entanao rehetra ao anaty lalao izany, ary raha nilalao nandritra ny fotoana kelikely ianao - manokatra valisoa sy mividy hoditra - tsy te hanamora ny mpangalatra izay te hisambotra ianao. ny kaontinao.
Ny rafitra fanamarinana roa lafin-javatra an'ny Fortnite 2fa dia manampy dingana roa amin'ny fidiranao. Raha tokony hampiasa tenimiafina tokana hidirana mivantana amin'ny lalao, izay azo vinavinaina, voajirika, na miseho amin'ny fanitsakitsahana angon-drakitra, dia misy tenimiafina sy kaody ampiasaina. Rehefa miditra voalohany ianao dia handefa kaody ho anao koa ny lalao. Raha tsy misy io kaody io, dia tsy misy ilàna azy ny tenimiafina, izay miaro ny kaontinao amin'ny loza mety hitranga rehefa misafidy ny toerana handefasana ny code ianao, izay manakana ny fidirana kisendrasendra.
Tsy vitan'ny hoe miantoka ny kaontinao sy miaro ny fitaovanao rehetra nokarohinao izany, fa mahazo emote Boogie Down manokana ihany koa izay azonao atao raha toa ka azonao atao ny manamarina ny antony roa an'ny Fortnite. Ary raha milalao Save the World ihany koa ianao, ny fanamarinana roa-antony dia hahazo anao 50 Armory slots, 10 Backpack slots ary Troll Stash Llama Legendary.
Vakio ihany koa: Ahoana no hanaovana valopy taratasy
Tena mora ny mampiasa Fortnite fanamarinana roa lafin-javatra hiarovana ny kaontinao Fortnite. Ka ity no fomba ahafahan'ny Fortnite fanamarinana roa lafin-javatra ary miaro ny entanao rehetra.
Inona no atao hoe Fortnite 2FA?
Fanamarinana roa-antony - 2FA raha fohy - dia fomba iray hahatonga ny kaontinao Fortnite azo antoka kokoa. Satria malaza be ny Fortnite, dia misy foana ny olona manandrana mijirika ny kaontinao ary mahazo miditra amin'ny hoditra tianao indrindra. Ny fampandehanana ny fanamarinana roa lafin-javatra dia tsy maintsy atao tanteraka mba hisorohana ny fidiran'ny tsy ilaina.
Ny fitsipika dia izao: isaky ny misy olona manandrana miditra amin'ny kaontinao Fortnite amin'ny milina vaovao dia tsy maintsy manaporofo ianao fa fifandraisana tena izy (izany hoe ny anao) amin'ny alàlan'ny fampidirana kaody nalefan'i Epic amin'ny tompon'ny kaonty. Ity kaody ity dia azo alefa mailaka na omena amin'ny alàlan'ny fampiharana authenticator - anao ny safidy. Midika izany fa ho azo antoka tanteraka ny kaontinao. Raha mbola tsy omenao na iza na iza ilay kaody tokana 2FA mazava ho azy.
Ahoana ny fomba fampandehanana ny 2FA amin'ny Fortnite
Raha te hampiditra ny endri-javatra 2FA amin'ny kaontinao Fortnite dia mandehana any amin'ny Fortnite.com/2FA. Midira ao amin'ny kaontinao Epic Games ary eo ambanin'ny safidy fanovana tenimiafina dia tokony ho hitanao ny safidy hampavitrika mailaka 2FA na app authenticator 2FA. Safidio ny safidy tianao ary araho ny torolàlana eo amin'ny efijery ahafahana manamarina ny Fortnite 2FA.
Ahoana no ahazoako ny Boogie Down emote amin'ny alàlan'ny safidy 2FA Fortnite?
Amin'ny alàlan'ny fampahavitrihana ny safidy 2FA amin'ny kaontinao dia hahazo ny emote Fortnite Boogie Down ianao, izay efa nisy nandritra ny volana vitsivitsy izao - amin'ny fotoana hidiranao manaraka dia tokony hahazo ny valisoa ianao. Ka raha mbola tsy nahazo 2FA avy amin'ny Fortnite ianao dia manana izany - manana dihy vaovao iray hampiasaina amin'ny lalao ianao!
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hanakanana ny antso tsy fantatra anarana amin'ny Samsung